Matte Black Pull-Down Sprau Kitchen Faucet
Home / Fitaovana an-dakozia / Misintona Faucets ao an-dakozia / WOWOW Matte mainty mixeur an'ny lakozia
Manana talenta mainty an-dakozia miaraka amin'ny sprayer ary avelao ity liam-borona mainty ity hikaroka ny palaozan'ny lakoziainao.
Io no tsara indrindra amin'ny fifehezana, fitoniana ary fampisehoana rivotra.
2310800B torolàlana fametrahana
faucet maoderina 2310800B miaraka amin'ny fanoratana ny sprayer:
Mora mifanentana amin'ny ankamaroan'ny tototra: faucet an-dakozia eran-tany ho an'ny milentika amin'ny habeny mety sy fantsom-pidirana 50 sm (mafana sy mangatsiaka); haavon'ny spout: 7.1 mirefy, hahatratra ny spout: 8.8 santimetatra
Mora ny mametraka: misintona ary ny hosotra misy rano dia apetraka mialoha ny crème milentika, tapitra ny DIY toy ny oram-panoanana, ny takelaka tapa-drano ho an'ny fametrahana lavaka 1 na 3, azonao atao ny manamarina horonantsary fametrahana mba hahitana tsipiriany fanampiny.
Mora ampiasaina: RANO STREAM / SPRAY / AQUABLADE, fomba fanamboarana 3 mifanaraka amin'ny filàna isan-karazany amin'ny fanasana, fanosehana, fanasana ary fanadiovana; famolavolana arc avo lenta mifanaraka amin'ny Neoperl ABS hisorohana ny fiparitahana; tokana havia tokana manamora ny fanaraha-maso ny rano sy ny mari-pana; rafitra fanamafisana lanja mavesatra indrindra mahatonga ny lohan'ny famafazana hipetraka tsara foana ny spout aorian'ny fampiasana
Mora ny mitazona: ny famaranana mainty mahafinaritra dia mitazona ny haloto tsy ho etona ambonin'ny tany, ny spout vy sy kalitaon'ny kalitao mahomby dia maharitra an-taonany maro, ny volo varahina sy ny cartridge vita amin'ny seramika dia afaka manivana mineraly ary mitarika tsara, manaparitaka fantsona, vy vy sy varahina mpampitohy dia tsy harafesina mihitsy
FIAROVANA PATENT - Ny faucet an-dakozia dia drafitra 100% voalohany ary arovana amin'ny patanty.
Ny fandavanao ny harerahana aesthetic dia hanome anao fahitana vaovao, manasongadina ny toetranao sy mamokatra ny maso.
VOLA VOLA VOLA - Mamoaha fantsom-pandrehitra an-dakozia miaraka amina mpaninjara savony sy indostrialy fanamboarana vy tsy miova SUS 304, cartridge vita amin'ny seramika avo lenta no nanome ny fitsapana tsingerina 500,000
mba hahamarina fa haharitra folo taona mahery izany, ny fonon'ny vy zefana NSF manamarina manana nela voahosihosy marihitra marobe, ny sakan'ny PEX mahatohitra avo kokoa.
Azo antoka sy manintona tsara ny vidiny.
Fonosana tsara miaraka amin'ny boaty ary kirihitraka matevina, fampandehanana sivana, 7/24 Fanohanana ny mpanjifa, famerenana maimaim-poana 90 andro. Azafady mifandraisa amin'i EMAIL❤service@wowowfaucet.com
SKU: 2310800B Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Misintona Faucets ao an-dakozia Tags: 1.8 gpm, Fitaovana savoka an-dakozia, Toro-tanana Pull
21.4 X 11.1 X 2.8 santimetatra
Fomba maodely telo: mode stream / mode Spray / mode sweep